सन्दिपलाई किन खेलाएन दिल्लीले ? नेपाली समर्थकहरुले यसरी पोखे निराशा – WicketNepal
सन्दिपलाई किन खेलाएन दिल्लीले ? नेपाली समर्थकहरुले यसरी पोखे निराशा
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ चैत्र १०, आईतवार २२:३७
विकेटनेपाल, चैत १०
इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलमा दोश्रो पटक सहभागिता जनाउने क्रममा रहेका सन्दिप लामिछानेले गत सिजन जस्तै यो सिजन पनि सुरुवाती खेलमा मौका पाउन सकेनन्।
मुम्बई बिरुद्ध उसकै मैदानमा सिजनको पहिलो खेल खेल्न दिल्ली क्यापिटल्स उत्रदा आफ्नो अन्तिम-११ मा दिल्लीले सन्दिप र अमित मिश्रालाई स्थान नदिंदै अर्को लेग स्पिनर राहुल तेवतीया र देब्रे हाते स्पिनर अक्षर पटेललाई खेलायो।
खेलमा टस जितेर मुम्बईले फिल्डिंग रोजेपछि दिल्ली ब्याटिंग गर्न उत्रिएको हो।
आफ्नो अन्तिम-११ मा ४ जना विदेशी खेलाडी खेलाउनु पर्नेमा टिमले कोलिन इन्ग्राम, केमो पौल, कागीसो रबाडा र ट्रेन्ट बोल्टलाई स्थान दियो।
खेलपण्डितहरु तथा क्रिकवज जस्ता ठुला क्रिकेट वेबसाइटहरुले सन्दिपले अन्तिम-११ मा मौका पाउन सक्ने अनुमान गरे पनि खेल सुरु हुँदा सन्दिप समर्थकहरुलाई निराशा हात लाग्यो।
दिल्लीको अन्तिम ११- Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Shreyas Iyer (c), Rishabh Pant (wk), Colin Ingram, Keemo Paul, Axar Patel, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Trent Boult, Ishant Sharma
आईपीएलमा एउटा टिमले अन्तिम-११ मा ४ जना मात्रै विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने नियम छ। दिल्लीले मुम्बई बिरुद्ध पेस बलर रबाडा र बोल्टलाई स्थान दिएको हो। यस्तै अर्का तिब्र गति बलर तथा ब्याट्सम्यान केमो पौल र कोलि इन्ग्रामले स्थान पाउदा सन्दिपलाई अन्तिम-११ मा दिल्लीले सन्दिपलाई स्थान दिन सकेन।
दिल्लीले सिजनको दोश्रो खेल घरेलु मैदानमा २६ मार्चमा खेल्ने तालिका रहेको छ। फिरोजशाह कोटला मैदान स्पिनरलाई मदत गर्ने खालको हुनाले दोश्रो खेलमा भने सन्दिपले मौका पाउने सभावना प्रवल रहेको छ। तथापी अर्का अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा टिममा हुनुले सन्दिपले अन्तिम-११ मा मौका पाउनेमा संका गर्ने ठाउँ रहन्छ।
गत सिजन लिगको अन्त्य तिर अमित मिश्रा र सन्दिप दुवैलाई दिल्लीले एकै पटक अन्तिम-११ मा मौका दिएको थियो जुन क्रममा दुवैले राम्रो प्रदर्शन समेत गरेका थिए।
सामाजिक संजालमा सन्दिप समर्थकहरुको निराशा
सन्दिपलाई दिल्लीले अन्तिम-११ मा मौका नदिदा ट्वीटर र फेसबुकमा नेपाली फ्यानहरुले निराशा व्यक्त गरेका छन्। गत सिजन पनि सन्दिप टिममा नपर्दा यसरीनै फ्यानहरुले निराशा व्यक्त गरेका थिए।
हल्का ब्यस्त भैयाे ,सन्दीप लामिछाने लाई माैका नदिएकाले दिल्ली क्यापिटल लाई समर्थन छैन । हाराेस जिताेस मतलव नि भएन । #IPL2019
— Google boy (@GoogleB49438368) March 24, 2019
सन्दिप लामिछाने नभएकाे गेम के हेर्नु pic.twitter.com/THJQqlyiSH
— मेलिना ३२के (@iMelina45) March 24, 2019
आज दिल्ली ले सन्दीप लामिछाने लाई नखेलाएर भिर र असजिलो बाटो अख्तियार गरेको मा रामराम मात्र भन्न सकियो बाबुराम भन्न सकिएन।
— हरि प्रसाद गैह्रे (@HariPra60136711) March 24, 2019
यो पटक को Ipl को मुख्य नेपाली दर्शक सन्दिप लामिछाने नै हुने भयो
— आफन्त (@Bhuparaj5) March 24, 2019
सन्दिप पानि बोकेर आउछ अनि हेरेर सुतौला भनेको आएन
बत्तिस लाख गन्दा गन्दै फुर्सद नपाएर भएको हो कि?
— Durga Ghimire (@NepaliGooners) March 24, 2019
सन्दिप नो प्लेइङ 11 । आज म अब्सेन्ट है। ??
— Madhu Rana (@madhurana597) March 24, 2019
दिल्ली ले संदिपलाई खेलाएन भनेर झोले तथा हनुमानेहरू ले भोलि नेपाल बन्द गर्दैछन् रे????
संदिप कै कारण ले ipl तथा क्रिकेट हेर्न थालेका हरू पनि आजभोलि क्रिकेट का expert बनिरहेका छन् ???????
— Pray Aim Xettry??? (@Rawatprem4) March 24, 2019
दिल्ली हारेको हेरेर सुत्ने भनेको निद्रा लागिसक्यो, सन्दिप भाई नखेलाउँदा सम्म धोबी हार्नु पर्छ यो क्यापिटल की के टिम।
— Santosh Aryal (@becomingsantosh) March 24, 2019
मेरो बिपी बढिराछ भन्दिनु डिल्ली लाई
अर्को म्याचा सन्दिप?? लाई नखेलाय टिम नै किन्दिन बेर लाउदैन #VivoIPL2019 ?
— Samir Parajuli ( कान्छो ) (@samirparajuli98) March 24, 2019
आज सन्दिप लाई playing 11 मा राखेको छैन बस यो गम हारे हुन्छ दिल्ली ले
— Sindhu???? (@Sindhu67592459) March 24, 2019
आईपीएलको गत सिजन दिल्लीले कमजोर प्रदर्शन गर्दा १४ खेलमा ५ जित र ९ हार बेहोरेको थियो भने अंकतालिकामा पुछारमा रहेको थियो।
उक्त सिजन पहिलो ११ खेलमा सन्दिपलाई मौका दिईएको थिएन। १२ औं खेलपछि सन्दिपले मौका पाउदा ३ खेलमा ५ विकेट लिंदै नेपाली लेग स्पिनरले प्रभावित बनाएका थिए। त्यस क्रममा सन्दिपले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर बिरुद्ध १ विकेट ( ४-०-२५-१ ) , मुम्बई इन्डियन्स बिरुद्ध ३ विकेट ( ४-०-३६-३ ) तथा चेन्नाई सुपर किंग्स बिरुद्ध १ विकेट ( ४-०-२१-१ ) लिएका थिए।
पछिल्लो बर्षको आइपिएल पछी संचालन भएका टि-२० लिगहरुमा दक्षिण अफ्रिकाको घरेलु टि-२० लिग र भाइटालिटि टि-२० ब्लास्ट ( इंग्ल्याण्ड ) बाहेक अन्य सबै प्रतियोगितामा सन्दिप सहभागी हुँदै आएका छन्।
Sandeep Lamichhane, Shreyas Iyer, Ishant Sharma
यी सबै अनुभवको बलमा यस सिजन दिल्लीले सन्दिपलाई धेरै खेलमा मौका दिने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपी टोलीमा अमित मिश्रा, राहुल तेवतिया र अक्षर पटेल जस्ता अनुभवी भारतीय स्पिनर रहेकाले सन्दिपले अन्तिम ११ मा स्थान बनाउन सजिलो भने रहनेछैन।